Sidina vaovao San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam ary London amin'ny Air Transat izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina vaovao San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam ary London amin'ny Air Transat izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina vaovao San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam ary London amin'ny Air Transat izao.
Amin'ny famakafakana ny fironana fitsangatsanganana, dia mazava fa i Etazonia dia mbola iray amin'ireo toerana ambony indrindra ho an'ny Québecers sy Kanadiana taorian'ny areti-mifindra.
Ny Air Transat dia manitatra ny fandaharany any Etazonia miaraka amin'ny toerana roa vaovao, Los Angeles sy San Francisco, ary koa ny sidina isan-taona mankany Florida.
Air Transat dia manambara ny serivisy tsy an-kiato eo anelanelan'i Montréal – Amsterdam sy Quebec City – London.
Ny sidina Montreal – Amsterdam dia handeha intelo isan-kerinandro ary ny sidina Québec – Londres, indray mandeha isan-kerinandro.
Nanambara ny Air Transat fa zotra efatra vaovao no ampiana amin'ny fandaharam-potoana sidina fahavaratra 2022. Sambany ny zotram-piaramanidina no hanompo ny seranam-piaramanidina San Francisco, Los Angeles ary Amsterdam avy any Montréal. Ankoatr'izay, hanolotra sidina mivantana mivantana eo anelanelan'ny tanànan'i Quebec sy Londres izy io, hanamafy ny andraikiny amin'ny maha mpitatitra iraisam-pirenena voalohany avy amin'ny seranam-piaramanidina Jean-Lesage. Farany, ny Air Transat dia hanao zotra mankany Fort Lauderdale sy Miami mandritra ny taona.
“Amin'ny famakafakana ny fironana fitsangatsanganana, dia mazava fa i Etazonia dia mbola iray amin'ireo toerana ambony indrindra ho an'ny Québecers sy Kanadiana taorian'ny areti-mifindra. Noho ny fahaiza-manaon'ny andian-tsambo kilasy eran'izao tontolo izao, dia tonga lafatra amin'ny fanatanterahana izany fitakiana izany izahay ary mampifanaraka haingana amin'ny filan'ny mpandeha, ka izany no mahatonga ny serivisy ataonay any atsimon'ny sisintany hiitatra manomboka amin'ny 2022, "hoy ny fanazavan'i Annick Guérard, Filoha. ary Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Air Transat.
Air Transat dia manatsara ny fandaharan'asa sidina any Etazonia miaraka amin'ny fanampiana an'i California. Ny sidina Montréal - San Francisco dia hiasa indroa isan-kerinandro, raha ny sidina Montréal - Los Angeles kosa dia mandeha intelo isan-kerinandro.
Noho ny fitakiana maharitra ny sidina mankany Florida, ny lalana sasany izay tsy nisy afa-tsy tamin'ny ririnina teo aloha dia hatolotra mandritra ny taona. Mandritra ny fahavaratra, ny sidina Montreal - Miami dia hiasa in-telo isan-kerinandro ary ny sidina Québec - Fort Lauderdale, indray mandeha isan-kerinandro.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpitatitra dia manitatra ny serivisy mankany Eropa amin'ny alàlan'ny fampidirana serivisy mivantana ho an'ny fizarana roa, Holandy sy Royaume-Uni, ka mahatonga ny Air Transat ho an'ny sidina Kanadiana tokana manidina mivantana avy any Montréal mankany amin'ny renivohitra Holandey.
OMS: Fotoana ho an'ny fampandehanana vaksiny eoropeana izao
Sidina avy any Guatemala City mankany Mérida amin'ny TAG Airlines...
Cycas dia faly tamin'ny fandrosoana tany Soisa
Tazana tany an'efitr'i Shina ireo mpitatitra fiaramanidina amerikana
Arzantina, Kolombia, Namibia ary Però, tsy tokony hanana...
2021 Global Destination Index navoaka